LG G2 150 RAM တွင် RAM ကိုမည်ကဲ့သို့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရမည်နည်း Androidsis
ဒီရိုးရှင်းတဲ့လှည့်ကွက်နဲ့အတူ LG G150 မှာ RAM2Mb ဘယ်လိုလွှတ်မလဲ
Francisco Ruiz | | LG, Android cheat, လဲ tutorial
မင်းဘယ်လောက်လဲ Androidsis နောက်လိုက်များ မင်းသိလိမ့်မယ် သငျသညျအကြှနျုပျ၏ tutorials သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုများမှတဆင့်သိကြလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်သည်ပိုင်ရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည် LG G2 အမျိုးအစား D802 သို့မဟုတ်လည်း LG က G2 ကိုနိုင်ငံတကာမော်ဒယ်အဖြစ်လူသိများ။ လှည့်ကွက်အတော်များများ o မင်းဒီမှာအားလုံးမျှဝေတဲ့ရမ်တွေ သား ငါ့ကိုယ်ပိုင် terminal ကိုနှင့်အတူစမ်းသပ်မှု၏အသီးကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် LG G2 ကိုကြိုးစားပြီး Roms များသို့မဟုတ်လှည့်ကွက်အချို့သည်၎င်းတို့အနေဖြင့်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်ပြောနေတာကိုငါကောင်းကောင်းသိပြီးအကြံဥာဏ်ကောင်းများကိုအားလုံးနှင့်အတူမျှဝေပါ။
ဒီကိစ္စမှာမင်းကိုငါသင်ပြတော့မယ် ရိုးရှင်းတဲ့လှည့်ကွက်သို့မဟုတ်အစွန်အဖျား ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူသွားမလဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ LG G150 တွင် RAM2MB အခမဲ့ရယူပါ။ ၎င်းသည် LG G2 ကဲ့သို့သောအခြား G3 ကဲ့သို့သောအခြား terminal model များအတွက်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ဒါကြောင့် LG G3 လို LG Terminal များမဟုတ်တဲ့တခြားမော်ဒယ်များအတွက်မှန်ကန်တယ်ဆိုရင်ဒီစာမူရဲ့မှတ်ချက်တွေကိုမှတ်ချက်ပေးဖို့ကြိုးစားသူတိုင်းကိုမေးပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ LG G150 တွင် RAM မှတ်ဥာဏ် ၁၅၀ Mb မည်သို့အခမဲ့လွှတ်ရမည်နည်း၊ မော်ဒယ်အားလုံးအတွက်မှန်ကန်သည်
သင့်အားမသင်ကြားမီ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ LG G150 မှာ RAM2Mb ပါမည်သည့်မော်ဒယ်လ်နှင့်မူကွဲပဲဖြစ်ပါစေကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြသွားမည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်မှုသည်မည်သည့်အကျိုးဆက်များရရှိမည်နည်း။
လှည့်ကွက်သည် LG ကုမ္ပဏီ၏ဆိပ်ကမ်းများတွင်ပုံမှန်အားဖြင့် activate လုပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုရပ်ဆိုင်းရန်ဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းရန်အသုံးပြုတဲ့ဝန်ဆောင်မှု LG မှယောက်ျားများသည်ကုမ္ပဏီ၏ဆိပ်ကမ်းသုံးစွဲသူများကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်အန္တရာယ်များကိုသိရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအမြဲတမ်းထိန်းချုပ်ထားသည် ကျားမအကြမ်းဖက်မှု, ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ, suicidioစသည်တို့
ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုခေါ်တယ် MLT ကျွန်ုပ်တို့၏ LG G2 ၏ဝန်ဆောင်မှုချိန်ညှိချက်များကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုရပ်ဆိုင်းသွားစေနိုင်သည်။ လျှို့ဝှက် settings အချို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ LG G2 ၏ခေါ်ဆိုမှုတွင်အောက်ပါကုဒ်ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သွားနိုင်သည်။
3845 # *LG G2 မော်ဒယ်#
ဘယ်မှာလုပ်ရမလဲ bold text ပြောင်းပါကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ၏တိကျသောမော်ဒယ်အတွက် LG G2 မော်ဒယ်ကဖော်ပြသည် LG က G2 D802 နိုင်ငံတကာအနေဖြင့်လျှို့ဝှက်မီနူးကိုအသုံးပြုရန်အောက်ပါကုဒ်ကိုထည့်ရမည်။
ဤကုဒ်ကိုရိုက်ပြီးသည်နှင့် option ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာရန်လိုအပ်သောလျှို့ဝှက် settings menu ပေါ်လာလိမ့်မည် MLT စာမေးပွဲ:
ယခုငါတို့ရုံရန်ရှိသည် Enable option ကို disable လုပ်ပါ "MLT သည် aftyer boting ကို run လိမ့်မည်":
ဤနည်းဖြင့်တည်းခိုခြင်း၊ disable "MLT သည် aftyer boting ကို run မည်မဟုတ်":
အခုဆိုရင် LG G2 နဲ့ LG ကိုသာ restart လုပ်ရမှာပါ အရင်ဖုန်းထက်ပိုပြီး RAM 150 MB ရပြီ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » ဒီရိုးရှင်းတဲ့လှည့်ကွက်နဲ့အတူ LG G150 မှာ RAM2Mb ဘယ်လိုလွှတ်မလဲ
38 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
Marvin ရာဖေးလ် Ancheta Cuéllar ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့် VS980 4G မော်ဒယ်နဲ့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး
Marvin ရာဖေးလ် Ancheta Cuéllarအားစာပြန်ပါ
yaz zaz ဟုသူကပြောသည်
၎င်းသည် LG970 (Optimus Black) နှင့် LG Optimus G (E976) အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
yaz zaz အားပြန်ပြောပါ
စမ်းကြည့်ပါ ဦး ။
ကိုယ်စားလှယ် Dom ဟုသူကပြောသည်
ငါဘယ်လို vs980 ရှိတယ်၊ ငါဝင်လို့မရဘူး၊ ငါ့ကိုကူညီပါ
Rep Dom ကိုပြန်လည်ဆက်သွယ်ပါ
ကျွန်ုပ်၏ lg g2 D800 နှင့်၎င်းအလုပ်မလုပ်ပါ။ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်သည်ရပ်တန့်သွားပြီဟုဆိုသည်၊
LG G3 မှာအလုပ်လုပ်တယ်
Juan Pablo Duga ဟုသူကပြောသည်
၎င်းသည် d805 တွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Juan Pablo Duga အားပြန်ကြားပါ
သင်ဒီမှာထည့်ထားသည့်လျှို့ဝှက် menu ထဲ ၀ င် 3845 # * 802 # နှင့်အခြားပို့စ်တစ်ခုတွင် ၂၇၇၆၃၄ # * # ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ခု၌ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သောအရာကဘာကွာခြားသနည်း။ သူတို့ကွာခြားပုံကိုသိရန်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါ၏အ VS980 4G တွင် code 277634 # * # နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့
ဒါပေမယ့်ငါ MLT စမ်းသပ်မှု option ကိုဝင်သောအခါသူက com.lg.hiddenmenu ဝန်ဆောင်မှုရပ်တန့်ကြောင်းငါ့ကိုပြောတယ်ဒါကြောင့်ငါ့အဘို့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး
Ernesto Gutierrez ဟုသူကပြောသည်
ဟစ္စကိုဆင်၊ Rom CloudyG3 v.2.0 မှာဒီ option ကို disable ထားပြီးသားလားဆိုတာကိုငါသိချင်ပါတယ်။ အဲလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ငါ့ကိုရပ်တန့်သွားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်းပြောဖို့ menu ထဲကနေထုတ်ယူလိုက်တယ်။
Ernesto Gutierrez အားပြန်ပြောပါ
Rom ကိုကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ထားပြီးမလိုအပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဖယ်ထုတ်ထားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် LG G2 နှင့် LG G3 နှစ်ခုလုံးအတွက်မူရင်း LG firmware များတွင်ပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
Guadalupe Trevino ဟုသူကပြောသည်
LG G ProLite D680 သည်စမ်းသပ်ပြီးကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Guadalupe Trevino အားပြန်ကြားပါ
ဖာနန်ဒို Mellone ဟုသူကပြောသည်
ဖာနန်ဒို Mellone အားတုံ့ပြန်ပါ
ငါ့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်လျှင် !!!! ငါ့မှာ iusacell မှ g2 mini ရှိတယ်၊ ငါကြိုက်တယ်၊ ငါဘာမှနောက်ထပ်ယူခဲ့တာလဲ။
ငါ၏အ D806 ၌ငါကကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ငါအာဂျင်တီးနား Greetings မှဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
၎င်းသည် d806 တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်တော်သိချင်တာကအောက်ဖော်ပြပါ option သည် USB DEBUGGING ဖြစ်သည်
Lg G2 Mini d625 တွင်ကောင်းမွန်သည်။ android ဗားရှင်းအသစ်သို့မွမ်းမံမှီတိုင်အောင်မွမ်းမံရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ lg နောက်ဆုံးသတင်းများပျက်ကွက်နေကြသည်။
ငါ့ lg pro lite မှာအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ connection ပြproblemနာရှိတယ်လို့ပြောတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် mmi code ကမမှန်ဘူး။ Francisco ကိုဘာပြproblemနာလဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်ငါအရမ်းသဘောကျမှာပဲ။
ကျွန်ုပ်၏ lg g2 mini d625 ကို lg update နှင့် update လုပ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုပျက်ကွက်နေသည်။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲ update ကိုဘယ်လိုဖျက်ပစ်မလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
၎င်းသည် lg D625 (lg G2 mini) နှင့်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်သည်ပြန်လည်နှေးကွေးသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး
d635 နဲ့ငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်dစာကိုမထည့်ပါနဲ့
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ LG G2 Mini D610 တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့သည်မှာ 3845 # * 610 # နှင့် voila နေရာဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်သည်အောက်ပါအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကောင်းသောအလှူငွေ
LG Optimus G pro တွင် "MLT" အစား "MPT test" အစား
၎င်းသည် lg g pro lite တွင်အဆင်ပြေစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးအစပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်အားအမှားတစ်ခုပေးခဲ့သည်။ သို့သော်သူတို့၏ဆဲလ်မော်ဒယ်ကိုအဆုံးတွင်ထားရန်လိုသည်။ ဥပမာသတ္တုတွင်းသည် D680 ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကုဒ်သည်ဤ 3845 # * 680 # နှင့်ဆင်တူသည်။ မီနူး
ဟယ်လို။ ကျွန်ုပ်၌ g2 D806 ။ သင်ပေးသောကုဒ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် NULL ကိုသာရရှိပြီးလျှို့ဝှက်မီနူးပေါ်လာမည်မဟုတ်ပါ။
Uriel tovar ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ lg g2 mini တွင်၎င်းကိုမူရင်း rom နှင့်စမ်းကြည့်သည်။ ပြီးတော့ငါဘယ်သိုးကိုမှမဖယ်ရှားဘူး !! modified ပြုပြင်ထားသော Rom ထည့်သွင်းလိုသော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုကြောက်ရွံ့သည်။ ငါစူးစမ်းလေ့လာတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲ ... ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖုန်းအရမ်းနှေးနေရင် !! ... အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Uriel Tovar အားပြန်ပြောပါ
ငါ၏အ Lg G2 806 XNUMX မှာအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ အမှားတစ်ခုရတယ်။ ငါကုဒ်နှစ်ခုနှင့်အတူကြိုးစားခဲ့နှင့်ငါအတူတူပင်အမှားရ။ ကူညီကြပါ !!
ကျွန်ုပ်၏ lg g4 D4 အတွက် 1700G LTE band များ၊ band 2100, AWS (2 and 802) ကိုမည်ကဲ့သို့ဖွင့်လှစ်ရမည်ကိုမည်သူမဆိုသိပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!!
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ ခင်ဗျားပါရမီရှင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တွင် LG G2 D805 ရှိပြီးကျွန်ုပ်သည်အဆင်ပြေပါသည်။ Stock rom rom 4.4.2 ကို flash လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ။ ကျွန်ုပ် Rom ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အသစ်တစ်ခုသို့။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်၏ AT&T LG G2 D800 တွင် MLT option ကိုကျွန်ုပ်မမြင်နိုင်ပါ။ ၎င်းကို disable လုပ်ရန်နှင့် RAM ကိုဖယ်ရှားရန်အခြားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရှိပါသလား။
လူတွေကူညီကြပါ !! ငါ့မှာ Lg mini2ရှိတယ်၊ နံပါတ် 3845 # * 625 # ကိုထည့်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါထွက်တော့မရဘူးငါပြန်စခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီမှာရှိနေတယ် တစ်စုံတစ်ယောက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ d802၊ အာဂျင်တီးနားမှပါ။ 4g ကကျွန်တော့်ကိုမခေါ်ပါဘူး။ ဒီ band ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲသိလား။ ငါ 1700 ဒီနေရာမှာအသုံးပြုကြောင်းရုံဖတ် lte ခညျြအနှောများထဲမှာမပါ
ကျွန်ုပ်သည်၎င်းအားပိတ်ထားပြီးပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏ညီမှဖြစ်သကဲ့သို့သူသည်ဟားခါးမတိုင်မီပြုလုပ်ခဲ့သည် (lg g2 mini d265)
Nexus4ကို Android 5.0 Lollipop သို့မွမ်းမံနည်း
Android 5.0 Lollipop ၏နောက်ခံပုံများနှင့်အသံများကို download လုပ်ပါ